गुणन तालिकाहरू ➡️ Online अनलाईन डिस्कभर ▷ ➡️
Tतपाईं गुणन को कुरा। यो हुन सक्छ तपाइँ सोच्नुहुन्छ भन्दा सजिलो सिक्नुहोस्। सबै कुरा तिनीहरूलाई चिन्न, तिनीहरूलाई दोहोर्‍याउने र तिनीहरूलाई सम्झने कुरा हो र ती तपाईंको बाँकी जीवनमा तपाईंसँगै रहनेछन्। त्यसको लागि जानुहोस्!
त्रुटि: दृश्य अवस्थित हुन सक्दैन d0241853ho
La गुणन तालिका यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं आफ्नो जीवन भर धेरै प्रयोग गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं युवा अवस्थाबाट सिक्नुहुन्छ भने तपाईं कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। यदि हामी निरन्तर प्रत्येक तालिकाहरू दोहोर्याउँदछौं, केही घण्टामा तपाईं प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंले गुणा गर्नको लागि सबै नम्बरहरूमा महारत प्राप्त गर्नुभयो।
के तपाई टेबुलहरू सिक्दै हुनुहुन्छ? हामी हाम्रो लेख सिफारिस गर्दछौं: गुणन तालिका कसरी सिक्ने। त्यो याद गर्नुहोस् १ देखि १० सम्म गुणन तालिका ती गणितमा आवश्यक छन्। यदि तपाईं तिनीहरूलाई द्रुत रूपमा मास्टर गर्नुहुन्न भने, भविष्यमा तपाईंसँग समस्याहरू हुनेछ जब यो सरल गणना गर्न आउँदछ। तर नडराउनुहोस्! हामी तपाईंलाई विश्वास दिलाउँछौं कि यो तपाईंको सोच्नेभन्दा सजिलो छ। उदाहरणको रूपमा, तपाई रोचक हुनुहुन्छ कि तपाईले बुझ्नु भयो कि x x are १२ हो। यसको मतलब यो हो कि पटक is पटक दोहोर्याइएको छ, हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि3पटक repeated पटक दोहोरिएको छ, यो उही हो।
यद्यपि यो रोचक छ कसरी गुणा काम गर्दछ बुझ्नुहोस्तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा, यो तपाईको मेमोरी हो कि प्रत्येक गुणा नतिजा तुरून्त सुनाउँदछ।
1 १ देखि १० सम्म गुणन तालिका
2 गुणन तालिका के हुन्?
2.1 गुणन तालिकाले कस्तो फाइदा ल्यायो?
3 गुणन तालिका कसरी सिक्ने?
4 १ तालिका
5 १ तालिका
6 १ तालिका
7 १ तालिका
8 १ तालिका
9 १ तालिका
10 १ तालिका
11 १ तालिका
12 १ तालिका
13 १ तालिका
१ देखि १० सम्म गुणन तालिका
को गुणन तालिका आवश्यक छ, हाम्रो जीवन भर हामी परिस्थितिहरू फेला पार्न गइरहेका छौं जहाँ हामीले तिनीहरूलाई थाहा पाउनुपर्दछ र मास्टर गर्नुपर्दछ ठूलो सजिलो संग। सब भन्दा साधारण अवस्था जहाँ हामी तिनीहरूलाई फेला पार्न सक्छौं:
• १० टिकट किन्नु भएको छ तपाईंको सम्पूर्ण परिवारको लागि घटनाको लागि र तपाईंलाई सबैको मूल्य द्रुत रूपमा जान्नु आवश्यक छ। एउटा सम्भावना सबै इनपुटहरू एक-एक गरेर जोड्न सकिन्छ, र अर्को सम्भावना प्रयोगको लागि हुनेछ la १० टेबल0 यसले हामीलाई तुरून्त समाधान दिन्छ।
• अर्को अवस्था जान्नुपर्ने हुन सक्छ हामीलाई कति पेट्रोल चाहिन्छ कुनै ठाउँमा पुग्नको लागि, यदि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो कारले प्रत्येक kilometers किलोमिटरमा के खर्च गर्दछ। यस अवस्थामा हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं la १० टेबल सबै भन्दा राम्रो विकल्प को रूप मा।
• Saber कति वस्तुहरू धेरै बक्सहरूमा छन् यदि हामीलाई थाहा छ कि तिनीहरू प्रत्येकमा कति एकाईहरू छन्।
• वस्तुहरूको समूहको पूरा मूल्य जान्नुहोस् यदि हामीलाई थाहा छ कि कति मूल्यवान छ।
• एक दर्जन अण्डाको मूल्य जान्नुहोस् यदि हामीलाई थाहा छ कि ती मध्ये एउटा मूल्य के हो।
• यदि तपाइँसँग कम्पनी छ र तपाइँसँग २००० कामदारहरू छन् जहाँ सबैले समान तलब पाउने छन्, तब साधारण गुणाले तपाइँलाई तपाइँको कम्पनीमा तपाइँका सबै कामदारहरूलाई कति पैसा तिर्नुपर्दछ भनेर जान्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू धेरै सामान्य अपरेशन हुन्।
यी सबै र अधिकको लागि राम्ररी जान्नु महत्त्वपूर्ण छ गुणन तालिकायसका साथै गुणन तालिकाको फाइदा पनि जान्नु राम्रो हुन्छ। हामी देख्न सक्छौं, हामी जाँदै छौं परिस्थितिहरू आवश्यक छ एक गुणन तालिका धेरै सामान्य र पनि विविध छन्, र यसैले उनीहरूलाई निपुण बनाउने र तिनीहरूलाई गहिराइमा चिन्नु हाम्रो जीवनमा प्रायः एक दायित्व हो।
गुणन तालिका के हुन्?
को आविष्कार गुणन तालिका दार्शनिक र गणितज्ञलाई श्रेय दिईन्छ पायथागोरस। विशाल बुद्धिमताका साथ उनले यी गणितिय अपरेसनहरूलाई कल्पना गर्न सके, यद्यपि यो पायथागोरियन स्कूलले पछि उनीहरूलाई सिद्ध तुल्यायो।
गुणा तालिकाहरू तिनीहरू आफ्नो समयमा वास्तविक क्रान्ति थिए, किनभने उनीहरूलाई धन्यवाद ठूला गणितिय अपरेसनहरू धेरै पटक धेरै संख्याहरू थपे बिना नै गर्न सकिन्छ।
धेरै वर्षसम्म, सबै प्रकारका तालिकाहरू र अनुक्रमहरू बनाइएको थियो, केही तालिकाहरू ० देखि30 from सम्मका figures फिगरहरू थिए, तर तिनीहरूसँग आधारभूत टेबल ० देखि १० सम्मको सफलता थिएन।
1642 मा ब्लेज पास्कल एक स्वचालित क्यालकुलेटर आविष्कार जुन यी गणित अपरेशनको लागि रुब्रिक थियो।
पहिलो गुणन तालिका, एक Cartesian तालिका समावेश (वा पायथागोरियन तालिका ) जुन प्रत्येक बक्समा अर्कोसँग सामेल हुने समावेश गर्दछ।
गुणन तालिकाले कस्तो फाइदा ल्यायो?
• व्यापारीहरूले आफ्नो खरीद बिक्री बिक्री धेरै छिटो गर्न सक्दछन्।
• समयका अर्थशास्त्रीहरू र कर संकलन गर्नेहरूले अब छोटो समयमा ठूलो अपरेशनहरू गर्न सक्थे।
• बासिन्दाहरूले अधिक जटिल कार्यहरू गर्न सक्दछन् जुन पहिले लामो समय लिन्छ।
हामी देख्न सक्छौं, गणित र विशेष गरी गुणा तालिकाहरू, सुरूमा तिनीहरू आफ्नो पहिले उत्पादन गर्न शुरू गर्यो समाजलाई फाइदा। त्यतिखेर त्यस्ता उपयोगी उपकरणहरू हुनु विज्ञानले ल्याएको वास्तविक उपहार थियो। आजकल, गुणन तालिकाबिना बाँच्न सक्षम हुनु अकल्पनीय हुनेछ, किनकि दैनिक रूपमा लाखौं अपरेसनहरू गरिन्छ जहाँ यी टेबलहरू आवश्यक छन्।
गुणन तालिका कसरी सिक्ने?
तपाईं तिनीहरूलाई चिन्न सक्नुहुन्छ १ घण्टामा सबै!। यदि तपाईं आश्चर्य गुणन तालिका कसरी सिक्ने, हामीसँग शुभ समाचार छ, यो एक ट्रिक संग धेरै सजिलो छ ! दिमाग छ दुई प्रकारका मेमोरी: छोटो र लामो अवधि, यो चालले तपाईंलाई तिनीहरूलाई द्रुत रूपमा सिक्नको लागि अनुमति दिनेछ र तपाईंलाई सदाका लागि रहनेछ। हामी यी चरणहरू अनुसरण गर्दैछौं जुन तालिकाहरूलाई अत्यन्तै सरल बनाउँदछ।
• पहिलो चरण। उदाहरणको लागि लिनुहोस् १० पटक तालिका। र हामी यो सबै एक पटक पढ्न जाँदैछौं। चिन्ता नलिनुहोस् यदि तपाईं यो सबै याद गर्नुहुन्न, सुरुमा यो सामान्य हो, हामी यसलाई पढौं।
• दोस्रो चरण। हामी कागजातको टुक्राहरूसँगै सबै समाधानहरू कभर गइरहेका छौं, गुणनहरू बिना नै, हामी मात्र समाधानहरू यसलाई कभर गर्दछौं:
• तेस्रो चरण। हामी सुरुमा सुरू गर्न जाँदैछौं र हामी कति × × १ हो भनेर जान्न कोशिस गर्दैछौं, हामी परिणाम निकाल्ने गर्छौं र कागजलाई जाँच गर्नको लागि यसलाई कम गर्छौं, यदि तपाईंले सहि पाउनुभयो भने, अर्को × २ गुणाका साथ जारी राख्नुहोस्, यदि तपाईं असफल हुनुभयो भने तपाईंले कभर गर्नुपर्नेछ। सबै समाधानहरू र सुरू गर्न फिर्ता।
• चौथो चरण। यदि तपाईंले × × २ हिट गर्नुभयो भने, त्यसपछि अन्त सम्म कागज एक एक गरी कम जारी राख्नुहोस्, यदि तपाईंले मिस गर्नुभयो भने तपाईंले फेरि ती सबैलाई कभर गर्नुपर्दछ र सुरुबाट सुरू गर्नुहोस्। र त सबै टेबल संग।
यो प्रणाली ध्यान बढाउन तपाइँको मेमोरी प्रयोग गर्दछ। यस तरीकाले, तपाईको दिमागले सबै भन्दा राम्रो गर्छ कि गुणन तालिका जान्नको लागि ताकि यो प्रत्येक तालिकाबाट सुरुबाट सुरू गर्नुपर्दैन। यसैले यो प्रणाली ती मध्ये एक हो जसलाई हामी सबैभन्दा प्रभावकारी ठान्दछौं। एकै समयमा हामी तालिकाहरूलाई बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका हुनेछौं, ताकि अध्ययन धेरै पूर्ण हुनेछ।
दीर्घकालीन स्मृति सबैभन्दा प्रभावकारी हो। के यो व्यायाम उत्पादन गर्दछ कि तपाईंको मस्तिष्क धेरै ध्यान दिएर छ, किनभने यो जान्दछ कि यदि तपाईं असफल हुनुभयो भने तपाईं फेरि सुरुमा फिर्ता जानुपर्नेछ। यो तपाइँले 10 गुणा तालिकाहरूसँग गर्नुपर्‍यो, र बारम्बार विधि दोहोर्‍याउनु हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि १ घण्टामा तपाईं ती सबैलाई चिन्नुहुनेछ!
बारेमा चाखलाग्दो विवरण गुणन तालिका :
• गुणन तालिकाहरू सरल गणित कार्यहरू हुन् जसमा धेरै पटक नम्बर थप्ने समावेश हुन्छ, उदाहरणका लागि × × = = २१ (यसको मतलब + + + + = = २१)। तिनीहरू धेरै साधारण अपरेशन हुन् तर एकै समयमा उनीहरू जीवनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, किनकि तपाईं तिनीहरूलाई धेरै प्रयोग गर्नुहुनेछ।
• गुणन तालिकाहरू जानेको महत्त्व महत्त्वपूर्ण छ, प्रयोगका केहि उदाहरणहरू हुनेछन्: यदि एउटा कागतीको मूल्य dollars डलर छ र म le लिम्बन किन्छ भने, त्यसो भए मलाई कति खर्च लाग्छ? एक गणितीय अपरेशन x x = = २०, हामी जान्दछौं कि dollars डलर x le लेमन २० डलर हो। तपाईले यो गणितीय अपरेशन हजारौं पटक तपाईको जीवन भर प्रदर्शन गर्नुहुनेछ।
• हामीले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा मास्टर गर्नुपर्छ। द्रुत रूपमा प्रत्येक गुणनको समाधान पाउनको लागि तिनीहरूलाई राम्ररी जान्न महत्त्वपूर्ण छ, यसले हामीलाई सम्बन्धित गणनाको साथ धेरै समय बचत गर्न अनुमति दिनेछ।
• त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् गुणन तालिका जान्नको लागि, हामी लेख सिफारिस गर्दछौं गुणन तालिका कसरी सिक्ने, तर हामी केहि विवरणहरू पनि व्याख्या गर्दछौं, उदाहरणका लागि: यदि हामीलाई कति × × = = १२ छ भनेर थाहा छ भने हामी जान्दछौं × × = = १२ के हो, याद गर्नुहोस् कि अर्डरले समाधानलाई असर गर्दैन, यस प्रकारले × × = = २१ र3= = = २१। यस चालले तपाईंलाई धेरै अपरेशनहरूमा प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
• गुणन तालिकाहरू सिक्नको लागि उत्तम र सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका, प्रत्येक टेबलमा बारम्बार दोहोरिने समावेश गर्दछ, यसले तपाईंलाई सजिलैसँग र जीवनभर याद गर्दछ।
अब जब तपाइँ तालिकाहरू जान्नुहुन्छ, समय आयो जीवनको लागि तिनीहरूलाई सिक्नुहोस्यस वेबसाइटमा हामी तपाईंलाई मेमोरी ट्रिकहरू प्रस्ताव गर्दछौं जसले तपाईंलाई कहिले पनि भुल्दैन र प्रत्येक पटक तपाईंलाई आवश्यक परेको छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ।
त्यो सम्झनुहोस् स्थिरता सफलताको कुञ्जी होयद्यपि उनीहरू गाह्रो लाग्न सक्छ, गुणन तालिकाहरू सिक्न धेरै कम समय चाहिन्छ सँधै, यो प्रत्येकलाई दोहोर्‍याउने र दोहोर्‍याउने कुरा हो, हामी निश्चय छौं कि एक साँझमा तपाईंले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जुन तपाईंले उनीहरूलाई आजीवन आफ्नो स्मृतिमा कुँदिएको छ।